आमिर खानका कारण कैयौं महिला र बालबालिकाको जिवन ब’र्बा’द भयो, पहिला ‘डिभोर्स’ गर्ने अनि उनैलाई साथी बनाउने ? – Sunaulo Nepal TV
आमिर खानका कारण कैयौं महिला र बालबालिकाको जिवन ब’र्बा’द भयो, पहिला ‘डिभोर्स’ गर्ने अनि उनैलाई साथी बनाउने ?
एजेन्सी । दक्षिण भारतका चर्चित स्टार जोडी सामन्था प्रभु र नागा चैतन्यले हालै सामाजिक सञ्जालमा डि–भो—र्सको घोषणा गरेका छन्। दुवैले आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलमा आफ्नो विवाह टुटेको खबरको पुष्टि गरे। जे होस्, उनीहरुको बिछोड को खबर बाहिर आए पछि, प्रशंसकहरु दुखी भए, सबैले यो समाचार को लागी आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थाले। अब बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतले पनि यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले कंगनाको पोस्टमा सामन्था र नागाको नाम कतै पनी राखिनन्, तर उनले यो स्पष्ट गरिन् कि उनी उनीहरुको बारेमा मात्र कुरा गरिरहेकी थिइन्। यति मात्रै होइन, उनले एक बलिउड सुपरस्टारलाई उनीहरुको डिभोर्सको कारण बताइन्। यो संगै, उनले यो पनि लेखिन् कि सबैलाई थाहा छ कि उनी कसको बारेमा कुरा गरीरहेकी छिन्। अहिले कंगनाको यो इन्स्टाग्राम पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ।
कंगनाले लेखेकी छिन्, ‘बलिउड मा एक तलाक विशेषज्ञ को कारण, दुबैको तलाक भयो’। उनले आफ्नो पोस्टमा लेखिन् ुजब पनी डि–भो—र्स हुन्छ, यो सधैं पुरुषको ग–ल्ती हो, मैले यो भन्दा रू–ढि–वा–दी वा न्यायिक लाग्न सक्छु, तर भगवानले नै महिला र पुरुषहरुलाई यस्तो बनाउनुभएको छ।
जसले लुगा फेरे जस्तै श्रीमती फेर्छ त्यस्ता ब्यक्ति प्रति तदा देखाउन आवश्यक छैन । लुगा फेरे झै डि—भो—-र्स गर्ने अनि उनैलाई साथी बनाउँछु भन्दै नाटक गर्ने यस्तो देखावटी गर्नु हुँदैन । यहाँ १०० मध्ये एक महिला हुन सक्छ जो गलत छ अन्यथा यो धेरैजसो केटाको गल्ती हो।
यति मात्रै होइन, कंगनाले अर्को पोस्टमा लेखेकी थिइन्, ुदक्षिण भारतीय सिनेमाका अभिनेता, जसले आफ्नो चार वर्ष पुरानो विवाह तोडे र डि—भो–र्स–को निर्णय गरे । उनीसँग लामो समयदेखि प्रेममा थिए । हालसालै, उनी एक बलिउड सुपरस्टार (अमिर खान) को सम्पर्क मा आए जो एक तलाक विशेषज्ञ पनि मानिन्छ, जसले धेरै महिलाहरु र बच्चाहरुको जीवन ब—र्बा–द गरेको छ, यो सबै धेरै सजीलो भयो। यहाँ अन्धकारमा राख्न केही जरुरी छैन, सबैलाई थाहा छ म कसको बारेमा कुरा गरीरहेको छु।
कंगनाले यस पोस्टमा कुनै बलिउड सुपरस्टारको नाम लिएकी छैनन्, तर उनी जसरी कुरा गरीरहेकी छिन् त्यो सीधा आमिर खान तिर इशारा गर्दैछ। वास्तवमा, केहि महिना पहिले आमिरले किरण राव संग डि–भोर्स–को घोषणा गरेका थिए। एकै साथ, नागा चैतन्य अमिरसंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को छायाँकनका लागि संगै छन् । आमिर नागार्जुनको घरको पार्टीमा पनि भाग सहभागी भएका थिए । जहाँ सामन्था थिइनन् । यस्तो अवस्थामा कंगनाले एक किसिमले नागा र सामन्थाको डि–भोर्स–को कारण आमिर खानलाई बताइरहेकी छन् ।
Previous राजकाज त्यागेर प्रेमीसंग विवाह गर्दै राजकुमारी, ऋण तिर्न नसकेर विवाह रोकिएका कुमरोले राजकुमारीलाई बेहुली बनाउन पाए
Next लण्डनमा नेपालीले बेच्न थाले कोदोको तीनपाने र,’क्सी, एक बोटलको मूल्य कति ?